पब्जी गेमको डर लाग्दाे कुलतः यसले स्वास्थ्यमा कसरी हानी गर्छ ? « हाम्रो ईकोनोमी
पब्जी गेमको डर लाग्दाे कुलतः यसले स्वास्थ्यमा कसरी हानी गर्छ ?
फुर्सदमा सम्झने गेम हो, पब्जी । स्मार्टफोन भेट्नसाथ खोजिने गेम हो, पब्जी । पब्जी गेम भनेपछि कामधन्दा छाड्नेहरु पनि छन् ।
लेखपढ गर्न छाड्ने पनि छन् । यस्तो लाग्छ, उनीहरुको सपना(विपना पब्जी नै हो ।
खेलका आफ्नै सर्त र सीमा हुन्छन् । खेलको आफ्नै महत्व हुन्छ । खासगरी आउटडोर गेमहरुले शारीरिक, मानसिक विकासमा ठूलो सघाउँ पुर्‍याउँछ ।
त्यसका अरुपनि थुप्रै फाइदा छन् । जस्तो कि, प्रतिस्पर्धाको भावना विकास हुन्छ ।
क्षमता विकास हुन्छ । एकता एवं सामाजिक भावना निर्माण हुन्छ ।
यद्यपी अहिले भर्चुअल गेमको जमना छ । घरभित्र अझ एउटै कोठामा कोचिएर भर्चुअल गेममा रमाउनेको संख्या बढ्दो छ ।
यी भर्चुअल गेमहरु सर्वथा गलत भन्ने होइन । भर्चुअल गेमले पनि मानसिक तनावबाट मुक्त गराउन सक्छ । मनोरञ्जन दिन्छ । कतिपय चलाखीपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्छ ।
एक २४ बर्षिय युवाले पब्जी खेलिरहँदा आफ्नो स्वास्थ्यमा कसरी त्यसले असर पुर्यायो भन्ने कुरा शेयर गरेका छन् । उनका अनुसार पब्जीले त्यस्तो भयानक स्वास्थ्य समस्या त पैदा गराएको छैन । यद्यपी उनको स्वास्थ्य स्थिती भने सामान्य छैन, जो हुनुपथ्र्यो ।